महिलाले ‘प्राइभेट अंग’ सुख्खा राख्नुपर्छ, दिनमा २ पटक पेन्टी फेर्नैपर्छ- डा. शाह (भीडियो) – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १५, २०७८ समय: १४:४३:११
एचबी ताम्राकारले नयॉं कार्यक्रम ‘COVID:19—The Second Wave With HB’ शुभारम्भ गरेका छन् । पहिलो कार्यक्रमको पाहुनाको रुपमा नेपालकै बरिस्ठ महिला तथा प्रसुती रोग बिशेषज्ञ डा तुम्ला लाकौल शाह सँग बिशेष कुराकानी गरेका छन् ।कोरोना लागेको महिलाले भ्रखरै जन्मेको आफ्नो बच्चालाई केयर गरेर दुध खुवाउदा केहिपनि असर नहुने डा. तुम्ला शाहले बताएकी हुन् । योजना विना महिलाको पेटमा बच्चा रहेको अवस्थामा समयमै सम्पर्क गरेर निर्णय गर्न आवहान गर्दै , औषधि, सिरिंज र क-ण्डोम को प्रयोग गरेरपनि सुरक्षित हुन् डा.शाहले विशेष जोड दिनुभयो ।
सवै नारीहरुलाई विशेष आग्रह गर्दै डा. तुम्ला शाहले प्रत्येक दिन दुई पटक फरक पेन्टी प्रयोग गर्नैपर्ने बताएकी हुन् । यौ- नी लामोसमयसम्म भीज्नु भनेको महिलाकोलागि ख़तरनाक कुरा भएको बताउदै , निरंतर सफा गरेर सुक्खा राख्नुपर्ने बताईन् ।डा. शाहका अनुसार कोरोना पोजेटिभ श्रीमान र श्रीमती विच यौ -न स-म्पर्क गर्न सकिने पनि बताई । यस्तो गर्दा कुनैपनि असर नहुने बताउनु भयो । नेपालमा गाईनोको समस्या हुनेहरुलाई कोरोना हुदा कुनैपनि असर नहुने तर सवैले सचेतना अपनाउनुपर्ने बताईन् ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा महिलाहरुको महिनावारी को समयमा तल्लो पेट दुख्ने र महिनावारी निर्धारित समयभन्दा पछी वा छिटो हुने समस्या ठुलो समस्या नभएकाले चिन्ता नलिनपनि आग्रह गर्नुभयो । यो समस्या चिन्ता गरेकै कारण समयमै ब्रेनबाट हर्मन विकास नभएकाले यस्तो समस्या देखिएको बताईन् ।